အန်းဒရွိုက်လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး APK ကို App တွေကို
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » စာမျက်နှာ 3
Category: - လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ
လုံခြုံရေးနှင့် Privacy Apps များ
လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှု Apps APK
မိုဘိုင်းကိရိယာ၏လုံခြုံမှုကိုဒီရက်တစ်ကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်၏လျှို့ဝှက်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုလည်းအများဆုံးအရေးပါပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း ပို. ပို. အသုံးပြုသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အများဆုံးအသုံးများ device ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
နေ့စဉ် Task ကိုစည်းရုံး
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူ, သူတို့ကလည်းအမှုအရာများနှင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်စည်းရုံး။ ဤရွေ့ကားနည်းပညာများအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်စနစ်များအတွက်အပြောင်းအလဲများအများကြီးရောက်စေမည်နေကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့လည်းအသစ်သောလုံခြုံရေးအန္တရာယ်များကိုဆောင်ကြဉ်းသွားနေကြသည်။ စမတ်ဖုန်းအများအပြားထိခိုက်မခံတဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကို compile နှင့်စုဆောင်းပါ။ ထို့ကွောငျ့အ access ကိုအသုံးပြုသူရဲ့ privacy ကိုလုံခြုံရေးအဖြစ်အဖှဲ့အစညျး၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်ရပါမည်။
ကွန်ပျူတာများလိုပဲ, စမတ်ဖုန်းလည်းတိုက်ခိုက်မှုများများအတွက်အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတိုက်ခိုက်မှုများကို SMS, MMS ကို Wi-Fi ကို, ဂျီအက်စ်အမ်, Bluetooth နှင့်ပင်အင်တာနက်များကဲ့သို့ဆက်သွယ်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသော Modes သာကနေလာနိုငျသောစမတ်ဖုန်းများတွင်လစ်ကွက်ဟာကွက်, ကိုအသုံးပြုပါ။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်သူလည်းဆော့ဖျဝဲ၏အားနည်းချက်များပစ်မှတ်ထားနှင့် browser မှာ။ အချို့ကအန္တရာယ်ရှိအစီအစဉ်များကိုလည်းအသုံးပြုသူဆင်းရဲအသိပညာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရန်။
ကြောင့်ဒီအကြောင်းပြချက်မှများစွာသောလုံခြုံရေးအစီအမံစမတ်ဖုန်းများအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ software ကိုလုံခြုံရေးအမျိုးမျိုးအလွှာကို အသုံးပြု. အနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအဖို့လက်လှမ်းထိန်းချုပ်ထားဖို့, ကောင်းသောအလေ့အကျင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရပါမည်။ ဒီဇိုင်းကနေ OS ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ apps များနှင့် software အလွှာဖို့, လုံခြုံရေးအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နေ့ရက်နှင့်အသက်အရွယ်တွင်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကြီးထွားလာအသိအမြင်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူအများအပြားရှိပါတယ် လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ပ်များ app ကိုဈေး၌ရရှိနိုင်ပါ။
ဤရွေ့ကား app များကိုကြော်ငြာ-ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ anti-ခြေရာခံရာမှ antivirus ကို apps များမှအမည်မသိ browsing နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို အသုံးပြု. မှအရာအားလုံးတို့အတွက်လုံခြုံရေးပေး။ ဒါဟာ over-the-ထိပ်တန်း malware ကိုစကင်နာများနှင့်လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များကိုကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့အချိန်ပါပဲ။ ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးအချို့ကိုဖော်ပြထားသောပါပြီ လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ပ်များ သင့်ရဲ့ Android device ကိုအဘို့။ တွင် Apps ကပ APK ကိုအဲဒီ apps တွေကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ခြိမ်းခြောက်မှုများဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိက data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
iPhone, Android ဖုန်းများအတွက်ရှာရန် ...
ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ပုံများ, ဖိုင်တွေကိုဝှက်ထားရန် ...
ဘေးကင်းလုံခြုံမှတ်စုများ - လုံခြုံတဲ့ကြော်ငြာ ...
အကောင်းဆုံး Applock - Locker ...
အခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ် 2019 -...
စူပါ Antivirus ကို - ဗိုင်းရပ်စ် ...
Calculator ကို Vault: App ကို Hider ...
ခိုးယူမှုသတိပေးချက် - အခမဲ့ ...
App ကို Hider- Apps ကပဖျောက်ဖျောက်ထားပါ ...
iSharing တည်နေရာ - ရှာရန် ...
SMS ကို blocker, စာသား spam များကို ...
calculator-Vault အသစ် ...
privacy Vault –...
timer Lock ကို - ဓာတ်ပုံ ...
Calc Vault-ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို ...
တံခါးကို Lock ကိုမျက်နှာပြင်
AtHome ဗီဒီယို Streamer -...
Bestline VPN ကို - အခမဲ့ ...
ဗီဒီယိုကို Surveillance Ivideon
PS Lock ကိုမျက်နှာပြင် -...
AppLock - ပြခန်း ...
ငါ့ကို Call ကိုရပ်တန့် -...
မျက်နှာပြင်သော့ခတ် - Funny နှင့် ...
လွန်ခဲ့သော 12345 ... 21 နောက်တစ်ခု